Xildhibaan Ka Tirsan Guddida Xidhiidhka Caalamiga Ah Ee Golaha Wakiillada Maraykanka, Mr. Chris H. Smith, Oo Si Wayn U Amaanay Doorashooyinka Somaliland[Xogg] | 18 May News
Hargeysa(Solna)- Xildhibaan ka tirsan Guddida Xidhiidhka caalamiga ah ee Golaha Wakiillada Maraykanka, Mr. Chris H. Smith, ayaa si weyn u ammaanay dimuqraadiyadda iyo Doorashooyinka Baarlamaanka iyo Goleyaasha Deegaanka ee ay Jamhuuriyadda Somaliland galayso 31-ka Bisha May ee sannadkan 2021ka.
Wakaaladda Wararka Somaliland ee SOLNA, ayaa soo xigatay hadal uu jeediyey Xildhibaan Chris H. Smith oo Jamhuuriyadda Somaliland ku tilmaamay xaqiiqo ka soo baxday mandaqada Geeska Afrika.
Chris H. Smith wuxuu sheegay inay Somaliland ka qabsoomayaan 31ka May ee sannadkan doorashooyinka Baarlamaanka iyo Goleyaasha Deegaanka, iyadoo lagu galayo nidaamka diiwaangelinta codbixiyeyaasha daahfuran islamarkaana loo dhan yahay, diwaangwelintaasi oo dalka ka qabsoontay muddadii u dhexaysay 2020 illaa January 2021.
Waxaanu tilmaamay Xukuumadda Somaliland ay dhaqaale badan ku bixisay diiwaangelinta codbixiyeyaasha, waxaan xusay dalalka Midowga Yurub, Denmark, Finland, Netherland. France, Germany, UK iyo Maraykanka ay soo dhaweeyeen diiwaangelinta iyo hawlaha u diyaargarowga Doorashooyinka Somaliland.
Waxa kaloo uu intaas ku daray in Midowga Yurub, Denmark,Sweden, Norway iyo Taiwan ay xaqiijiyeen inay goobjoogeyaal u dirayaan doorashooyinka ka qabsoomaya Jamhuuriyadda Somaliland.
Xildhibaan Chris H. Smith waxa uu ku dooday inay Jamhuuriyadda Somaliland ay soo celinayso Dimuqraadiyadeedii iyo doorashooyinkii ku salaysnaa hal qof iyo hal cod,waxaanu dawladda Maraykanka u soo jeediyey inay wax la qabato oo dhiirigeliso dimuqraadiyadda ka tisqaaday Jamhuuriyadda Somaliland
Xigasho Wakaalada Wararka Somaliland